Chrome 87: saka unogona kushandisa mirairo yazvino vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
Saka unogona kushandisa (kana kumisikidza) iyo Chrome 87 mirairo
Musi waNovember 17, Google yakakanda Chrome 87, yazvino vhezheni yakagadzikana yewebhurawuza rako. Yakauya nezvinhu zvitsva senge yakavandudzwa mashandiro kana rutsigiro rwekutanga rwe "makadhi", senge mabikirwo, uye chitsva icho, kana panguva yekusvika kwayo, chisina kumisikidzwa nekutadza. Kubva pane izvo zvinoita, Google yakatoishandisa kuburikidza neOTA (iri kure), kunyangwe ichigonawo kuitiswa nemaoko kana iwe ukaedza uye ukaona kuti haishande.
Rutsva rwatiri kutaura nezvarwo ndirwo rwakadaidzwa neGoogle Chrome Maitiro, izvo zviri chaizvo zvinoraira kuti isu tinogona kuvhura zvakananga kubva kuURL bar. Pane zviito zvakawanda zviripo zvatinogona kutarisa mukati Iyi link, asi, kana tisingade kutambisa nguva, tinogona kugara tichiedza uye kunyora zvatiri kufarira kuti tione kana chiito chikaonekwa. Pano tinotsanangura maitiro atinofanira kuzviita.
Chrome 87 zviito zvichienda kumberi
Chekutanga pane zvese, ngatiitei bvunzo. Isu tinoenda kune iyo URL bar uye tinyore zvaunoona mune iyo skrini, ndokuti, "Gadziridza" pasina makotesheni. Kana bhatani rakatenderedzwa rikaonekwa nebrowser logo uye zvinyorwa "Gadziridza Chrome", zviito zvatova kushanda. Zvikasadaro, tinogona kuvamisa kubva kune iyo «Mireza» chikamu:
Isu tinoenda kune iyo URL bar.
Isu tinonyora, pasina makotesheni, chrome: // flags.
Isu tinotsvaga "omnibox zano bhatani mutsara" uye "omnibox pedal mazano" uye tovagonesa.
Pakupedzisira, tinodzvanya pane "Relaunch", iri pazasi kurudyi.
Pakati pezviito zvatinogona kuvhura, isu tine:
Gadziridza iyo bhurawuza, iyo inongooneka nekuisa "kugadzirisa".
Bvisa data rekubhurawuza nekutaipa «yakajeka nhoroondo.
Manage nzira dzekubhadhara nekutaipa "edit kiredhiti kadhi".
Vhura hwindo rakavanzika nekunyora "open incognito" kana kungoti "incognito".
Manage passwords nekutaipa "edit mapassword".
Dudzira peji, nekutaipa "translate peji" kana kungo "translate".
Ini pachangu ndinotenda izvozvo zvimwe zvezviito zvinonakidza, senge rekupedzisira mune runyorwa rwekare rwunotibvumidza kuti tishandure mapeji ese. Chinhu chitsva chinounza kuvandudzwa uye icho chinowedzera kune asingagone Chrome 87 inoenderana nekuita.
Chrome 87 ikozvino iripo kubva ku webhusaiti yepamutemo yeprojekti uye sechinhu chitsva chevashandisi varipo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Saka unogona kushandisa (kana kumisikidza) iyo Chrome 87 mirairo